SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bulgarian Catalan Cebuano ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hiri Motu Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kamba Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maltese Maya Mizo Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese (Brazil) Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Isita inorondedzerwa muEncyclopædia Britannica ichinzi “mutambo mukuru wevaKristu wokupemberera Kumuka kwaJesu Kristu.” Asi imhemberero yechiKristu here?
Kuti unyatsoziva kuti chimwe chinhu chekare chakawanika ndechechokwadi, unofanira kunyatsochiongorora. Saizvozvowo, kuti tizive kana Isita iri mhemberero yechiKristu, tinofanira kuongorora mashoko ose anotaura nezvayo.
Chekutanga, Jesu akaudza vateveri vake kuti vayeuke rufu rwake, kwete kumuka kwake. Muapostora Pauro akadana chiitiko ichi kuti “Kudya kwaShe Kwemanheru.”—1 VaKorinde 11:20; Ruka 22:19, 20.
Uyezve, zvakawanda zvinoitwa paIsita “hazvinei” nekumuka kwaJesu “asi zvakangotangwawo nevanhu,” inodaro Britannica. Semuenzaniso, ichitaura nezvezviratidzo zvinonyanya kushandiswa paIsita, zai netsuro, The Encyclopedia of Religion inoti: ‘Zai rinomiririra upenyu hutsva hunobuda parinotsotsonywa. Kuoma kwedemhe raro kunomiririra rufu.’ Inowedzera kuti: “Tsuro yainzi imhuka inobereka chaizvo, saka inomiririra kutanga kwematsutso.”
Philippe Walter, purofesa anoongorora zvinyorwa zvekuma500 C.E.-1500 C.E., anotsanangura zvakaita kuti tsika idzodzo dzizobatanidzwa pakupemberera Isita. Akanyora kuti “dzidziso dzechihedheni padzaipinda muchiKristu,” zvaiva nyore kuti zvaiitika pakupemberera “kupera kwemwaka wechando tichipinda mumwaka wechirimo” zviitwewo pakupemberera kumuka kwaJesu. Walter anowedzera kuti izvi ndizvo zvakatonyanya kuita kuti “mhemberero dzinochengetwa nevaKristu” dziiswe pakarenda yevahedheni, zvichiita kuti zvive nyore kutendeutsa vanhu vakawanda.
Nyaya yekuedza kutendeutsa vanhu nenzira iyi haina kuitika vaapostora vachiri vapenyu nokuti vaiita “sesimba rinodzivisa” kuti vaKristu vasatsauswa. (2 VaTesaronika 2:7) Muapostora Pauro akanyevera kuti kana “ndaenda,” varume ‘vachamuka votaura zvinhu zvisina kururama kuti vatsause vadzidzi vavatevere.’ (Mabasa 20:29, 30) Uye mumakore ekuma90 C.E., muapostora Johani akanyora kuti vamwe varume vakanga vava kutotsausa vaKristu. (1 Johani 2:18, 26) Saka zvakanga zvava nyore kuti tsika dzechihedheni dzipedzisire dzapinda muchiKristu.
“Musasungwa zvisina kukodzera pajoko nevasingatendi.”—2 VaKorinde 6:14
Vamwe vangaona sekuti kubvumira kwaiitwa dzimwe tsika dzepaIsita kwakanga kusina kuipa, vachiti zvaiita kuti “vahedheni” vanzwisise zvinorehwa nekumuka kwaJesu. Asi Pauro aisazobvumirana nazvo. Kunyange zvazvo Pauro aiona tsika dzakawanda dzechihedheni paaifamba muRoma, haana kutombofunga kuti kubvuma tsika idzodzo kwaizoita kuti abatsire vanhu kunzwisisa chokwadi pamusoro paJesu. Asi akatonyevera vaKristu kuti: “Musasungwa zvisina kukodzera pajoko nevasingatendi. Nokuti kururama kune ushamwari hwei nokusateerera mutemo? Kana kuti chiedza chine mugove wei nerima? ‘Naizvozvo ibvai pakati pavo, muzviparadzanise,’ anodaro Jehovha, ‘musabata chinhu chisina kuchena’”—2 VaKorinde 6:14, 17.
Zvishoma zvataongorora nezveIsita zvinoratidzei? Zvinonyatsoratidza kuti Isita haisi mhemberero yechiKristu.
Ona kwakatangira zvinhu zvishanu zvine chokuita nemhemberero yeisita.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Isita Imhemberero yechiKristu Zvechokwadi Here?